Buugaagta Elena Ferrante: magac been abuur ah oo iib ah | Suugaanta Wararka
John Ortiz | 28/12/2021 18:04 | Qorayaasha, Buugaag, Novela
Elena Ferrante waa magac been abuur ah oo qoraa Talyaani ah oo ka yaabiyay masraxa suugaanta adduunka ku dhawaad ​​labaatan sano. In kasta oo uu bilaabay shaqadiisa suugaanta ee 90-meeyadii, xirfaddiisa ayaa la soo saaray 2012 ka dib markii uu daabacay Saaxiibka weyn, sheeko cusub oo tetralogy ku bilaabatay Laba saaxiib. Sannadkii 2018, guushii sagadii ka dib, HBO waxay u habaysay TV-ga magaca buuggii ugu horreeyay ilaa hadda 2 xilli ayaa la sii daayay.
In ku dhow 20 sano oo uu ku jiray deegaanka suugaanta, qoraagu waxa uu hayaa buug ka kooban sagaal sheeko, sheeko carruureed iyo curis. Qarsoodisii ayaa ka hor istaagin inuu ka adkaado akhristayaasha aan la tirin karin ee ku nool Talyaaniga iyo kuwa kale ee adduunka intiisa kale. Buugiisa ugu dambeeyay, Nolosha beenta ee dadka waaweyn (2020), waxaa soo diyaariyay Time isagoo ka mid ah 100-ka buug ee ugu wanaagsan sanadka.
1 Buugaagta Elena Ferrante
1.1 L'amore xanaaqsan (1992)
1.2 Figlia mugdiga ah (2006)
1.4 Sheekada Perduta Bambina (2014)
2 Ku saabsan qoraaga, Elena Ferrante
2.1 Anita Raja, "qoraa" ka dambeeya Elena Ferrante
L'amore wuu xanaaqay (1992)
Waa buuggii ugu horreeyay ee qoraa Talyaani ah, oo ay u hibeysay hooyadeed. Waxaa lagu daabacay Spain oo leh magaca Jacayl xanaaq badan (1996), waxaa tarjumay Juana Bignozzi. Waa sheeko cusub oo laga dhigay Naples bartamihii qarnigii XNUMX-aad, waxa uu ka kooban yahay 26 cutub waxaana lagu sheegay qofka ugu horreeya. Bogaggeeda Xiriirka ka dhexeeya hooyada iyo gabadheeda ayaa qaraabo ah - Amalia iyo Delia -.
May 23-keedii, Meyd ayaa laga helay badda dhexdeeda, kadib markii la aqoonsaday meydka waxaa la xaqiijiyay inuu yahay Amalia. Akhbaarta naxdinta leh ayaa soo gaartay dhegaha Delia kaliya maalintii ay dhalatay. In hooyadii dhimatey waxay ahayd waxa uu filanayey in uu ogaado uun maalintaas.
Musiibadii ka dib. Delia waxay go'aansatay inay ku laabato dalkeeda hooyo ee Naples si ay u baarto dhacdada, iyada oo la yaabban in Amalia ay xidhan tahay rajabeetada oo keliya. Markii uu magaalada soo galay, ma sahlana in uu la kulmo waayihii hore ee uu aad isugu dayay in uu iska indho tiro, yaraantaas murugsan ee uu go’aansaday in uu maskaxdiisa ka xidho.
Marka uu daaha ka rogo sirta ku xeeran dembiilaha, waxa soo ifbaxaya runta ay been abuurteen deegaankaaga, noloshaada iyo shakhsiyaddaada, cayriin kaa dhigi doona inaad aragto xaqiiqo cusub.
Jacayl xanaaq badan
Gabadha mugdiga ah (2006)
Waa riwaayaddii saddexaad ee suugaanta. Waxaa tarjumay Celia Filipetto waxaana lagu daabacay Isbaanishka oo cinwaankeedu yahay Gabadha mugdiga ah (2011). Waa sheeko qofkii ugu horeeyey laga sheekeeyey by jileheeda, Leda, iyo Mawduuca ugu weyni waa hooyada. Sheekadu waxay ku taal Naples waxayna soo bandhigtay in ka badan 25 cutub oo gaagaaban.
Leda waa haweeney ku dhawaad ​​50 sano jir ah, la furay oo leh labo gabdhoodBianca iyo Marta. Waxay ku nooshahay Florence, iyo daryeelka gabdhaheeda ka sokow, waxay u shaqeysaa sidii macalin suugaanta Ingiriisiga. Noloshaada caadiga ah waxay si lama filaan ah isu beddeshaa marka Faraceeda waxay go'aansadeen inay aabbahood ula guuraan Kanada.
Erayada Elena Ferrante
Naagta, iyada oo ka fog in ay dareento niyad jab, way is aragtaa free inaad sameyso waxaad rabto, sidaas darteed fasax ayuu u aaday dalkiisa hooyo ee Naples.
Inta aad ku nasanayso xeebta la wadaaga dhawr qoys oo deegaanka ah, nooleeyo, si aan ula kac ahayn, soo dhaafay. Isla markiiba, oo ay ku soo duuleen cid aan la garanayn oo ku soo degtay xusuusteeda. samee go'aan adag oo khatar ah.
Gabadha madowga ah...
Saaxiibka cajiibka ah (2011)
Waa sheeko-xariirkii ugu horreeyay Laba saaxiib. Noockeeda Talyaaniga ayaa la daabacay 2011. Sannad ka dib waxaa loo turjumay Isbaanish by Celia Filipetto waxaana lagu soo bandhigay magaca: Saaxiibka weyn (2012). Sheekada waxaa lagu sheegay qofkii ugu horreeyay wuxuuna ka dhacay Naples qarnigii la soo dhaafay. Munaasabaddan, saaxiibtinimada ayaa ah saldhigga sheekada, tanina waxay leedahay laba dhalinyaro ah oo jilayaal ah: Lenù iyo Lila.
Lenù iyo Lila waxay ku qaateen caruurnimadooda iyo dhallinyaradooda magaaladii uu ku dhashay, meel aad u liidata oo ku taal duleedka Naples. Habluhu way wada koreen xidhiidhkooduna waxa uu u dhexeeyey saaxiibtinimadii iyo xafiiltankii lagu yaqaanay wakhtigaas. Labaduba riyadoodu waa caddahay, waxay ku qanacsan yihiin inay naftooda ka adkaadaan oo ay ka baxaan meeshaas mugdiga ah. Si aad u gaadho hamigaaga, waxbarashadu waxay noqon doontaa furaha.
Saaxiibka cajiibka ah (Laba...
Sheekada bambina perduta (2014)
Gabadha luntay (2014) —ciwaanka Isbaanishka—waa shaqada soo afjarta tetralogy Laba saaxiib. Sheekadu waxay ka dhacdaa qarnigii XNUMXaad ee Naples waxayna ka kooban tahay Lenù iyo Lila markay qaangaareen. Labaduba waxay qaadeen jihooyin kala duwan, taas oo keentay inay iska fogeeyaan, laakiin sheeko cusub oo Lenù ah ayaa mar kale mideyn doonta. Sheekadu waxay soo socotaa ilaa maantadan la joogo labadan dumar ah oo dib u eegay noloshooda.
Lenù wuxuu noqday qoraa caan ah, wuxuu u guuray Florence, wuu guursaday oo wuxuu dhalay. Si kastaba ha ahaatee, guurkooda ayaa burburay. Dhankeeda, Lila waxay lahayd masiir ka duwan, ma aysan u suurtagelin inay ka baxdo tuuladeeda waxayna wali la halgameysaa sinnaan la'aanta halkaas ka jirta. Lenù wuxuu go'aansaday inuu bilaabo buug cusub mawduucuna wuxuu ku soo laabtay Naples, taas oo u ogolaan doonta inay mar kale la kulanto saaxiibkeed..
Gabadhii Lumay (Laba...
Guusha sagaashooyinka kadib Laba saaxiib, Elena Ferrante ayaa soo bandhigtay Nolosha beenta ee dadka waaweyn (2020). Waa sheeko uu leeyahay Giovanna oo ah jilaageeda oo ka dhacday Naples 90-meeyadii.. Sheekadani waxay leedahay astaamo shaqsiyadeed oo Ferrante ah, kaasoo wareysi wadareed ku sheegay: “Caruur ahaan waxaan ahaa been badan. Ku dhawaad ​​da'da 14, bahdilaad badan ka dib, waxaan go'aansaday inaan koro."
Giovanna waa gabar 12 jir ah in waxay ka tirsan tahay bourgeoisie Neapolitan. Hal maalin Aabihii ayuu ka maqlay -Isagoon ogeyn- in ay ahayd gabadh fool xun, sida eedadeed Vittoria. Iyada oo ku dawakhsan oo ku jahawareertay waxay maqashay, waxay awood u yeelatay inay aragto sida dadka waaweyni u yihiin munaafiqiin iyo beenaalayaal. Waxaa soo galay xiisaha ay u qabto, waxay go'aansatay inay raadiso naagtan, si ay indhaheeda ugu aragto waxa aabbaheed ula jeedo.
Nolosha beenta ah ee ...
Ku saabsan qoraaga, Elena Ferrante
Qarsoodigeeda awgeed, in yar oo tafaasiil taariikheed ah ayaa laga og yahay qoraaga Talyaaniga. Dad badan ayaa sheegaya in uu ku dhashay Naples 1946-kii oo uu hadda ku nool yahay Turin. Intii ay ku jirtay shaqadeeda, waxa kaliya oo lagu yaqaanaa dhawr waraysi oo ay ku bixisay iimaylo.
Anita Raja, "qoraa" ka dambeeya Elena Ferrante
In 2016, Haweeney lagu magacaabo Anita Raja ayaa barteeda Twitter-ka ku xaqiijisay in ay tahay qofka ka dambeeya magaca beenta ah. Fariimo dhowr ah, qofkani wuxuu qirtay inuu yahay "qoraa" wuxuuna codsaday in la ixtiraamo sirtiisa, ka dibna tirtiray akoonkii. Si kastaba ha ahaatee, wakhti yar ka dib Tommaso Debenedetti - oo si murugo leh loogu yaqaanay inuu faafiyo waraysiyo been abuur ah oo lala yeesho dadka caanka ah - ayaa sheegtay tweets-yadaas, sidaas awgeedna shaki badan.
Debenedetti wuxuu xaqiijiyay inuu la kulmay Raja, oo ay siisay xogta. In kasta oo uu jiro mawqifka shakiga leh ee qoraaga - oo isku magacaabay "Horyaalka Talyaaniga ee Beenta" - saxafiyiinta qaarkood ayaa xaqiijiyay aragtida. Si taas loo sameeyo, waxay waydiiyeen halka lagu shubay lacagta xuquuqda daabacaada waxaana lagu shubay koontada Anita Raja, taas oo xaqiijin karta inay iyadu tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Noocyada » Novela » Buugaagta Elena Ferrante
Christina Rossetti. Sanad guurada dhimashadiisa. Gabayo